Uphengululo lweMibhobho yeDelta
Ikhaya / Blog / Uphengululo lweMibhobho yeDelta yokuHlola: Isikhokelo sokuthenga se-2021 seDelta Shower Faucets
2021 / 02 / 04 uhleloBlog Isikhokelo se-Faucet 4681 0
Nokuba usuku lwakho luxakekile kangakanani, luxinzelelekile, okanye luyingxaki, ungasoloko uthembela kwisitya esikhulu sokuhlaziya kunye nokuphumla. Ewe, inkqubo yakho yompompo weshawa idlala indima kwindlela ohlaziya ngayo ishawa yakho.
Iimveliso ezisemgangathweni ophezulu zeDelta zigqitha ngaphaya kweepompo zokuntywila kunye nakwiinkqubo zokuhlamba ngokupheleleyo, ukusukela kukhetho oluhle lwabiwo-mali ukuya kubunewunewu bokwenene. Jonga iipokethi zethu eziphezulu zenkqubo yokuhambisa amanzi ye-Delta.
1. Ukumisela iseti yokuCwangcisa i-Two-in-One Shower
Kwishawari enkulu, ngamanye amaxesha kufuneka ugqithele ngaphaya kwentloko yesangqa esine-engile enye kwaye ufikelele kwizimo ezahlukeneyo. Ligama lomdlalo kunye I-In2ition yokubeka i-Two-in-One Shower I-Chrome 75486C .
Isincamathisi sokuthambisa ngesandla esiphathwayo
Iindlela ezine zokutshiza
Inkqubo yokuhlambela i-In2ition ifumene eyona ndawo iphambili kuluhlu lwethu kuba ngelixa lizele ziimpawu, ikwayindlela yokuhlamba engabizi kakhulu kuluhlu lwethu. Lixabiso elifanelekileyo kuyo nayiphi na indlu yangasese.
Inkqubo yeshawari inefom eyahlukileyo. Inendawo yokuthambisa amanzi efumanekayo ngesandla, kodwa i-wand ihleli embindini wentloko yomzimba wokuhlamba umzimba. Oku kukunika iindlela ezine zokutshiza onokukhetha kuzo: ukutshiza okupheleleyo komzimba, ukutshiza, ukunqumama, kunye nokutshiza okupheleleyo komzimba kunye nokuthambisa ngomzimba ngaxeshanye.
2. Iwindemere yoSetyenziso oluNye oluSetyenziswayo lweShower
Inkqubo yakho yeshawari yiyo eyenza ishawa yakho ihlale kamnandi kwaye ihlaziye. Kutheni le nto kungafanelekanga ukuba ibe yinto yokubonisa? Yinkqubo yokucinga emva kwe I-Windemere eSebenza ngokuSebenza ngeShower Trim Kit I-Chrome BT14296 nembonakalo yayo emangalisa.
I-MultiChoice Universal Valve
Ukubeka iliso kwi-Valve-Balanced Valve
Iinketho ezininzi zekiti
Uhlobo lwewindows Window lokutshintsha isitayile yenye yezinto ezininzi ezinomtsalane kule nkqubo. Ukuqinisekisa umgangatho othembekileyo we-Delta, le nkqubo yeshawari ibandakanya iitekhnoloji zobunini ezininzi njengeMultiChoice Universal Valve kunye ne-Monitor Pressure-Balanced Valve Coverage.
Eyona nto iphambili kule khithi ngu-H2Itekhnoloji yeOlinetic. Le yenye yezinto ezintsha zeDelta, eyilelwe ukuba izenze ngathi ishawa yakho ihambisa amanzi amaninzi ngelixa inkqubo igcina amanzi.
IWindemere ayidanisi xa kufikwa kulwenziwo, nokuba. Ungathenga iikiti zokuhlamba kunye neeshawari kunye ne-tub combo. Iza ngeendlela ezintathu zokugqibela kwaye ungayithenga kunye okanye ngaphandle kwe-rough.
3. I-Lahara ye-14-Series Series-Handle Shower kunye neTub Kit
Ukuba uphakathi kwabanini bamakhaya abangenakubalwa abaneepompo zikaLahara kwindawo yabo yokuhlambela, yeyiphi indlela ebhetele yokuxhasa ezo mpompo kunenkqubo yokuhlambela? UDelta uyalwazi uvuyo lwendlu yangasese elungelelaniswe kakuhle kwaye bayenza lula nge I-Lahara ye-14-Series Series-Handle Shower kunye neTub Kit Ibronze T14438-CZ .
Ilungiselelwe ibhafu kunye neshawa combo
Izicwangciso ezintlanu zokutshiza
Inkqubo yokuhlamba ayibaphoxi abalandeli bezinye iimveliso zeLahara zeDelta. Ngaphezulu kwenkangeleko yeklasikhi, le nkqubo ineeseti ezahlukeneyo zokhetho lokutshiza. Babandakanya ukutshiza okusemgangathweni okugcweleyo komzimba, ukutshiza kokuthambisa, ukutshiza ngomthambo wokutshiza womzimba ogcweleyo, isitshizi sokuthambisa esimanzi, kunye nomsebenzi wokuphumla.
Isitshizi sokuthambisa esimanzi yinto enqabileyo. Kukuthamba okufana nokutshiza okufanelekileyo xa ufuna ukukhanya, uhlaziye uhlambe.
4. ILahara ye-14-Uthotho oluPhethe i-Shower Faucet
Ngaba ufuna ukubonakala kukaLahara kunye neempawu ezintle kodwa ungenayo ibhafu kwisitya sakho? Unethamsanqa kunye I-Lahara ye-14-Series Series-Handle Shower Faucet Ibronze T14238-CZ .
Le nkqubo yokuhlambela iLahara inazo zonke izinto ezifanayo kunye nezibonelelo njengesixhobo sokuhlambela kunye nebhafu, kubandakanya imowudi yokuthambisa ethambileyo. Umahluko ophambili kukuba le nkqubo ayiquki itepu yetepu. Ngenxa yoko, inezoqoqosho kancinci, nayo.
Zombini iinkqubo zeeshawa zeLahara ezili-14, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iikiti azibandakanyi ivelufa, ke qiniseka ukuba uthenga ivalve oyifunayo ngaphambi kokuba uqale ufakelo.
5. I-Trinsic 17-Series Dual-Function Shower Kit
Cinga ngeTrinsic njengoyilo lweDelta olwenzelwe ngokukodwa abaninimzi abanolusu lwangoku. Njengombhobho wokuhlambela waseTrinsic, i I-Trinsic 17-Series Dual-Function Shower Kit IChampagne Bronze T17259-CZ inazo zonke izitayile zokusika ozifunayo.
Iinketho ezintlanu zokugqiba
I-Trinsic yenye yeendlela zokuphela eziphezulu zeDelta, kwaye ikiti yabo yokuhlamba ayinjalo. Yeyona modeli ibiza kakhulu kuluhlu lwethu, kodwa ngesizathu esivakalayo.
Inkqubo yokuhlamba iTrinsic isebenzisa i-H ephezulu ye-Delta2I-Okinetic Technology, esebenzisa ulungelelwaniso olwahlukileyo lobungakanani kunye nobungakanani bamaconsi ukwenza ukuba uzive ngathi ufumana amanzi amaninzi kunokuba unjalo.
Enye into elula yokusetyenziswa yiVolve Pressure-Balanced Valve: enye yezinto ezintsha zeDelta. Ivalve igcina uxinzelelo oluzinzileyo kulawulo lobushushu ukuze ungafumani ukuvuka okungathandekiyo kotshintsho ngequbuliso lobushushu.
Ukukhetha inkqubo yakho yokuhlamba i-Delta
Wonke umntu uneengcamango zakhe malunga nento eyenza ishawa enkulu, kwaye iDelta iyakuqonda oku. Kungenxa yoko le nto banezinto ezininzi abanokukhetha kuzo kuseto lwesitshizi kunye nenkqubo yeshawa ukuze ukwazi ukukhetha eyona ilungele iimfuno zakho. Zonke iinketho ezikolu luhlu zifanelekile.
tagUphengululo lweMibhobho yeDeltaisitya sokuhlambela	Ngaphambili :: Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 seefayili zeDelta zasekhitshini